एक्कासी लोकदोहोरी मोडल सम्झना बुढाथोकी अस्पतालमा भर्ना, आमा तनाबमा ! यस्तो छ अवस्था…(हेर्नुहोस् भिडियो) – PathivaraOnline
Home > समाचार > एक्कासी लोकदोहोरी मोडल सम्झना बुढाथोकी अस्पतालमा भर्ना, आमा तनाबमा ! यस्तो छ अवस्था…(हेर्नुहोस् भिडियो)
एक्कासी लोकदोहोरी मोडल सम्झना बुढाथोकी अस्पतालमा भर्ना, आमा तनाबमा ! यस्तो छ अवस्था…(हेर्नुहोस् भिडियो)
admin March 27, 2019 समाचार	0
काठमाडौं – सम्झना बुढाथोकीका प्रशंसकहरू उनको बारेमा भन्ने गर्छन्, ‘नाच्नु त सम्झना जसरी नाच्नु । कस्तो लचकता, मादकता र आकर्षण छ उनको नृत्यमा…।’
तर, सम्झना भने अझै आफूलाई नृत्यको विद्यार्थी नै ठान्छिन् । विशेष गरेर लोकगीतका म्युजिक भिडियोहरूमा उनको एकछत्र नै राज थियो । आजसम्म ३ सयभन्दा बढी लोकगीतका म्युजिक भिडियोमा आफ्नै कौशलता प्रस्तुत गरिसकेकी छिन् उनले ।
अब सम्झना आफू मात्र होइन अरूलाई पनि नृत्यमा पोख्त बनाउन लागिपरेकी छिन् । उनले काठमाडौंको बागबजारमा निकै भव्य स्कुल सञ्चालनमा ल्याएकी छिन् । गु्रप वन क्रियसन एडभाञ्चर प्रा.लि. नामक यो स्कुलमा नृत्य, मोडलिङ, अभिनय, एरोबिक, गायन तथा सङ्गीत र साल्सालगायतका विधाको प्रशिक्षण दिइने कुरा सम्झनाले बताइन् ।
उनै समझना बुढाथोकी अस्पतालमा भर्ना भएकी छिन् । एक्कासी लोकदोहोरी मोडल सम्झना बुढाथोकी अस्पतालमा भर्ना, आमा तनाबमा ! यस्तो छ अवस्था…हेर्नुहोस् भिडियो…
मास्टर्स पढेका दिदी बहिनी चकलेट बेच्दै, महिनामा लाखौं कमाई (भिडियो सहित)
झापामा सर्पले डसेर एक बालिकाको मृत्यु
दाङबाट आयो अत्यन्तै दुःखद खबर, दुई दिदीबहिनी एकैदिन अस्ताएपछि…
जिल्ला अस्पतालको ओपिडीमा भेटियो गाईको बथान, भिडियो भा इ र ल